Banyere Anyị - Fujian Joborn Machinery Co., Ltd.
nke China Stone Machinery
Igwe Mgbuji Ogbu
Stone polishing igwe
Igwe Igwe ọzọ
Fujian Joborn Machinery Co., Ltd. chọtara na "China Stone City" -china, shuitou, nwere mpaghara nke ihe dịka 60 acres, yana ihe karịrị mita 20,000 nke osisi nke oge a na ihe karịrị 4000 square mita nke ụlọ ọrụ nchịkwa, bụ a nnyocha na mmepe, n'ichepụta, ahịa na ọrụ na otu nke nkume mmepụta ngwá emeputa. Chịkọbara ahụmịhe bara ụba, ọmarịcha teknụzụ na ọrụ niile na-adịghị anya na-ahụ na ụlọ ọrụ ahụ nwetara aha ọma n'ahịa.
Ngwa ndị bụ isi bụ SQC450 / 600 / 700-4D igwe nchacha igwe, SQC1200-4D igwe na-egbutu etiti, SQC2200 / 2500 / 2800-4D ngọngọ igwe, SQ / PC-1300 pụrụ iche nwere ụdị profaịlụ, SPG resin series automatic polishing. igwe na na na. Quality mbụ bụ anyị ụlọ ọrụ nzube ụlọ ọrụ guzobere a ọkachamara àgwà akara Department, onwem na elu ule mmesho na ngwá, nlezianya ule usoro, si akụrụngwa zuo okokụre ngwaahịa nkwakọba ihe; a na-achịkwa usoro dị iche iche, iji hụ na ngwaahịa ndị arụpụtara dị elu.
Company na-edebe mmụọ nke "mbụ ndị mmadụ, na-azọpụta site na mma, merie site magburu onwe ya, ọhụrụ site ọgụgụ", na-eme n'ọdịnihu ụlọ ọrụ ga-enye ọkachamara nke nkà na ụzụ na àgwà mgbe niile kwalite ọrụ àgwà ike "China n'ichepụta. 2025 ", maka nlọghachi China n'ichepụta ngwa ọrụ okike na mbọ ike.
JOBORN Machinery wuru otu ndị ọkachamara nwere ahụmịhe bara ụba na imepụta igwe. Ihe karịrị afọ 20, ihe karịrị 60,000 nkume akụrụngwa n'ichepụta ọgaranya ahụmahụ na nkà na ụzụ ìgwè nyeere ụlọ ọrụ technology ka mgbe niile n'ihu nke ndị ọgbọ ya, -eme ihe uru na mmepụta technology, na Ngwa ngwa na-egosipụta ihe ọhụrụ nkume nhazi technology na ahịa mkpa ka mmepụta nke ngwaahịa, na-eme teknụzụ na ngwaahịa na-ebute ụzọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Joborn ígwè na-edebe ụkpụrụ ụkpụrụ mmụọ nke “ihe kachasị mmadụ mkpa, na-echekwa site na mma, merie site na nke ọma, nke ọhụrụ site na ọnụ ọgụgụ”. Were mkpa ndị ahịa dị ka etiti, were afọ ojuju ndị ahịa dị ka mmalite, yana ọsọ ọsọ klaasị, teknụzụ mbụ na klas mbụ, omume klaasị iji nweta "gafere atụmanya ndị ahịa, karịa ọkwa ụlọ ọrụ" ebumnuche ọrụ, nye ndị ahịa ihe niile -ihe, ire, usoro dum nke oru ire ere.
Hailian Pioneer Park, Obodo Shuitou, Nan'an City, Fujian Province